'द कपिल शर्मा शो' बाट एक्कासी किन हटाईए सिद्धू ? सिद्धुको सिटमा अब अर्चना
कमेडियन कपिल शर्माको ‘द कपिल शर्मा शो’ बाट नवजोत सिंह सिद्धू हटाइएका छन्। उनको ठाउँ अर्चना पूरन सिंहले लिएकी छन्। सोनी टिभीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमार्फत् एक भिडियो पोस्ट गर्दै शोमा अर्चनाको स्वागत गरेको छ। भिडियोमा कपिलले अर्चनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सिद्धू बस्दै आएको स्थानमा बसाएका छन्।
भिडियोमा अर्चनालाई देखेर कपिलले सोध्छन्, ‘तपाईं कसरी यहाँ आउनुभयो?’
जवाफमा अर्चनाले भन्छिन्, ‘तिमी, कृष्णा, भारती सबै यहाँ छौ। मलाई चाहिँ बिर्सियौ ?’
यति भनेर हाँस्दै कपिलले अर्चनालाई आसनग्रहण गराउँछन्। अर्चना पनि उनका लागि तयार गरिएको नयाँ सोफामा बस्छिन्। उनले दुइवटा शोका निम्ति सुटिङ पनि गरिसकेकी भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गत साता कश्मिरको पुलवामा भएको आतंकी हमलाका बारेमा दिएको टिप्पणीका कारण पन्जाबका मन्त्री समेत रहेका सिद्धू विवादमा तानिएका हुन्। उनको टिप्पणीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि ‘द कपिल शर्मा शो’ बाट उनलाई निकालिएको हो।
गत वर्ष कपिल शर्माको आफ्नै विवादका कारण शो बन्द भएको थियो। गत डिसेम्बरबाट नयाँ सिजनमा सुरू भएको कपिल शो फ्यानहरूले रूचाए पनि ‘टिआरपी’ उल्लेख्य नभएको बताइएको छ। योसँगै दर्शकले रूचाएको अनुहार ‘सिद्धू’ हटेपछि शोमा कस्तो असर पर्छ हेर्न बाँकी नै छ।
विहे अघि नै प्रियंका गर्भवती !
रणविर र आलियाको ‘गली व्वाई’ रुलिजकै दिन लिक